Indlu esemaphandleni emthubi eHaga. - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni emthubi eHaga.
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguErika
Indlu esemaphandleni enomtsalane eneveranda yabucala egadini nenemvakalelo esecaleni kwelizwe. Igumbi lokuhlambela labucala kunye nokupheka ukutya okulula. Ibhedi elala abantu ababini etofotofo, isofa kunye nomatrasi ophantsi.
Indawo ethe cwaka nepomakazi lendlu, kufuphi nendalo, indawo yokuqubha neendawo ezinkulu zokudlala. Umgama wokuhamba ukuya eSkoghall c kunye neevenkile kunye neevenkile zokutyela, phakathi kwezinye izinto.
Isakhiwo esikhulu esine-apile, i-platum kunye ne-berry bushes. I-fluffy ralidayits kunye nekati eyadini.
Iimitha eziyi-20 ukuya kwibhasi ekusa eKarlstad kwimizuzu eyi-20, imoto malunga
Apha ukwindawo enomtsalane esezilalini okwangoku embindini wendawo ehlala abantu. Le ndlu isemaphandleni ichazwe ziindwendwe zangaphambili njengendlu encinci entle "yedola".
Nceda uqaphele ukuba yindlu esemaphandleni encinci emalunga ne-32 sqm ebalungele kakuhle abantu abayi-2 ukuya kwabayi-3 kodwa ungalala abantu abayi-5 ukuba ukwimatrasi kwaye unokucinga ngokuphila. Ibhedi eyisofa ibalungele kakuhle abantwana abayi-2 okanye abantu abadala abancinci. Bona inkcazelo engakumbi ngezantsi.
Bukela iimuvi nefoto ku-Instagram gula.stugan
Igumbi 1. Ilizwe elisandul 'ukulungiswa nelikhanyayo. Ibhedi elala abantu ababini etofotofo, isitulo, iwardrobe encinci netafile esecaleni kwebhedi. Iibhokisi zokugcina izinto neempahla zakho phantsi kwebhedi.
Igumbi 2. Igumbi lokuhlala eliqaqambileyo elinesofa ebubanzi obuziimitha eziyi-1.75 nobude obuziimitha eziyi-1.25. (Ngokomzekelo, yamkela umntu omdala omncinci nomntwana.) Kukho nomatrasi omele ube nawo phantsi.
Itafile encinci yokutya, umsebenzi kunye nokuphola, izitulo ezi-4 kunye nesitulo. Irediyo.
Igumbi lokuhlambela elidala elinezindlu zangasese neshawa eshushu. Isepha, ishampu, i-conditioner kunye nokubetha iinwele ziyafumaneka.
Ikona encinci yasekhitshini enesinki namanzi acocekileyo. Ungazenzela isidlo sakho sakusasa uze upheke ukutya okulula. Ifriji enefriji, i-toaster, iketile kunye nokwenza ikofu. Isitovu esiphezulu esineepleyiti ezimbini zokupheka okulula ne-microwave. (I-microwave ikwigumbi lokuhlala ngoku) Izitya, amacephe nezinye izinto zasekhitshini, ityuwa, ipepa, ioyile kunye neti zikhululekile ukuba uzikhuphe. Qaphela: Akukhooveni.
Amashiti neetawuli ziqukiwe kwixabiso. Ibhedi yokuhamba yosana nesitulo esiphakamileyo iyafumaneka ukuba uyiboleke simahla ukuba uyafuna, nemidlalo ethile, iipeni, iphepha kunye neencwadi zabantwana.
Indawo yokuhlala epholileyo eSkoghall ekuthiwa yiHaga.
Iivenkile zokutyela neevenkile zokutya eSkoghall.
Ifanele abantwana kufutshane nendawo yokutyibiliza emkhenkceni neendawo ezinkulu zokudlala ecaleni kwepaki yabantu. Kukho imijikelo, imoto ehamba ngentambo, ifreyim yokunyuka, nokunye.
Kufuphi negquma elitsha kunye nomgama wokuya kwindalo kunye nomhlobo.
Kwi-Hammarö Arena, kukho iindlela ezintle zokuzilolonga kwaye kukho iholo ye-racket ekufutshane.
Ulwandle kwi-Mörudden camping enendawo yokutyela, ivenkile yokutyela kunye nezindlu zangasese.
Umgama wokuhamba ukuya "kwi-drum", indawo esemaphandleni yasehlotyeni, kufutshane neLake Vänern kunye nebhafu enamatye.
Ukuba ufuna ukuqubha elunxwemeni olunentlabathi entle, kukho indawo yokuqubha Getingberget ekumgama ozikhilomitha ezimbalwa ngemoto. Apho ungaphuma emanzini uye kwisiqithi esincinci. Kukho izindlu zangasese kunye nesishwankathelo sokutya okulula nge-ice cream.
IHammarö inendawo yokudlala igalufa oyidluliselayo xa usiya entabeni.
Ngumgama wokuhamba ngeenyawo ukuya kwiindlela ezintle zokuhamba emanzini eLillängshamnen apho kwakhiwa khona iindlela zokuhamba ngeenyawo ezigudle ikhaphethi kunye neendawo ezintle zeLake Vänern. Siyaxatyiswa ngeefoto ezintle zokutshona kwelanga kunye nethuba lokuhlala kwiibhentshi ezakhiwe kwisayithi okanye kwiipikniki ezisemathafeni ngasemanzini. Ecaleni kwechweba, kukho nomgangatho omkhulu welanga osandul 'ukwakhiwa.
Ukuba uyakuthanda ukutya kwaselwandle, kukho i-fish smoker entle kunye nevenkile yokutyela eLillänghamnen.
Ukuba uyayithanda igalufa encinci, ngumgama wokuya kwindawo entle kakhulu eSkoghall "Skoghall 's bangolf".
I-Kilenegården yindawo entle ongafuni ukuyiphosa malunga nemizuzu eyi-9 ngemoto ukusuka kuthi. Indawo yokuzonwabisa ekwindawo entle! Iindlela zokuzilolonga kunye nendalo entle.
Icebiso laseMzantsi weHammarö lihle ngeyona ndlela ibe libona kakuhle iVärnern evulekileyo. Iinduli kunye nendalo yonxweme olumnandi kakhulu kwaye apha uza kufumana inqaba enesibane phezulu iHammarö Skage. Le yindawo yeholide ethandwayo ethandwa ngabafoti. Kungcono ufike apho ngemoto uze emva koko uhamba ngeenyawo. Yindlela entle kakhulu yokuhamba enesikrini somoya kunye neendawo zokoja.
I-Karlstad ikude ngeekhilomitha eziyi-8 ngemoto kwaye inokuninzi!
Cofa nje ukuba unemibuzo, siyakuvuyela ukunceda. Ukuba asikho ekhaya, sinokufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile. Izitshixo ziza kushiywa nathi ngaphandle kokuba kuvunyelenwe ngenye indlela.